Nyangani Orara Zvakare Muchitokisi Zvichitevera Kusungirwa Nyaya Yaakanyora
Mapurisa ekwaMutare apomera mutori wenhau webepanhau reNewsDay, Kenneth Nyangani, mhosva yekuita zvemusarinya kana kuti crimina nuisance, sezviri pasi pechikamu 46 (2) (v) chemutemo weCriminal Law (Codification and Reform) Act Chapter 9:23.
Izvi zvinotevera kuburitswa nemusi weMuvhuro svondo rino neNewsDay kwenyaya inoti mudzimai wemutungamiri wenyika, Amai Grace Mugabe, vakagovera vatsigiri vebato ravo reZanu PF nhumbi dzinosanganisira zvipfeko zvemukati zvakambopfekwa.
Munyaya yake, Nyangani akati mumiriri weChikanga-Dangamvura muparamende, VaEsau Mupfumi veZanu PF, ndivo vakagovera zvipfeko izvi kuvanhu pamusangano wakaitirwa mumusha weGimboki nemusi weSvondo vakamirira Amai Mugabe.
Izvi zvakazoita kuti mapurisa asunge Nyangani usiku hweMuvhuro mushure mekunge VaMupfumi nevamwe vanodarika gumi vamhan'gara kumapurisa kuti nyaya yakaburitswa nebepanhau iri yaive yemanyepo.
Gweta riri kumirira Nyangani, VaPassmore Nyakureba, vanoshanda nekambani yemagweta yeMaunga, Maanda and Associates, uye vari nhengo yeZimbabwe Lawyers for Human Rights, vanoti Nyangani ari kuramba mhosva yaari kupomerwa iyi.
VaNyakureba vanoti vanotarisira kuti Nyangani, uyo akachengetedzwa paMutare Central Police Station, achamiswa pamberi pedare mangwanani emusi weChitatu.
Hurukuro naVaPassmore Nyakureba
Asi VaMupfumi vanoti zvakanyorwa naNyangani manyepo sezvo zvipfeko zvakabva kuna Amai Mugabe zvaive zvitsva zvisina kumbobvira zvapfekwa.
"Zvakatyamadza isusu vakatambidza vanhu, nevakatambidzwawo ma residents zvavagumburisa kwazvo kuti ndinganzi ndakapfeka chemukati chakambopfekwa here?" VaMupfumi vanodaro.
Vanoti nekudaro, ivo nevamwe vevanhu vakawana zvipfeko zvemukati izvi vamhan'gara nyaya yavo kumapurisa vakamirira Amai Mugabe.
Hurukuro naVaEsau Mupfumi